Lexio: Macluumaadka loogu beddelo Luuqad Dabiici ah | Martech Zone
Lexio: Macluumaadka loogu beddelo Luqad Dabiici ah
Thursday, April 2, 2020 Thursday, April 2, 2020 Douglas Karr
Lexio waa madal sheeko xareynta xogta oo adiga iyo kooxdaada ka caawineysa inaad heshid sheekada ka dambeysa xogtaada ganacsi - si aad u wada shaqeyn kartaan, isla bogga, meel kasta. Lexio wuxuu kuu falanqeynayaa xogtaada wuxuuna kuu sheegayaa adiga iyo kooxdaada waxaad u baahan tahay inaad ogaato. Looma baahna in laga dhex qoro muraayadaha dusha ama daloolada waraaqaha.
Ka fakar Lexio sida newsfeed-ka ganacsigaaga oo horeyba u ogaa waxa adiga muhiimka kuu ah. Kaliya ku xir ilaha xogta guud, Lexio isla markiiba wuxuu ku qoraa xaqiiqooyinka ugu muhiimsan ee ku saabsan ganacsigaaga Ingiriisi cad. Waqti yar ku qaad halganka xogta, iyo waqti badan oo dakhliga soo kordha.
Lexio ee Iibinta Iibka Salesforce
Lexio hadda si toos ah ula midoobaya Salesforce Sales Cloud Cloud isla markiiba. Si fudud ugu qor aqoonsiyada ishaada xogta, sug dhowr daqiiqo, oo bilow inaad wax akhriso.
Ka hel sheekooyinkaaga xogta taleefankaaga, laptop-kaaga, ama qalabka aad jeceshahay.
Sheekooyin fudud, oo si fudud loo fahmi karo, iyo eex la'aan ku saabsan xogtaada.
Waxay kuxirantahay ilaha xogta guud daqiiqado gudahood qaabeynta eber.
Waxbadan ka baro Lexio oo hel sheekooyinkaaga xogtaada. Marabtaa inaad wax ka qorto xog ka duwan ilaha kor ku xusan? Dhib malahan. Jadwal u sameyso kulan waanan kula shaqeyn doonaa si uu u qabsoomo.
Codso Dembi Lexio ah
Lexio ee loogu talagalay Google Analytics
Lexio waxay leedahay is dhexgal Google Analytics, waxaad ku arki kartaa demo sheyga halkan
Isdhexgalka Demo ee Lexio ee Google Analytics
Isku-darka Lexio ee Marketo, Hubspot, Salesforce Service Cloud, Google Ads, Microsoft Dynamics, ZenDesk, MixPanel, iyo Oracle ayaa ku soo socda.
Tags: AnalyticsAnalytics googlelexiosayniska sheekoluqadda dabiiciga ahOracleku mashquuliddaruuraha iibkaiibindaruur iibka daruur
Douglas Karr Thursday, April 2, 2020 Thursday, April 2, 2020
Symbl.ai: Madal horumarineed oo loogu talagalay Sirdoonka Wadahadalka
Zapiet: Fududee Alaab Gaarsiinta oo Bakhaar ku keydi Shopify